सुँगुर प्रजातिको अधकल्चो मासु खाँदा हुनसक्ने रोग : ट्राइकोनेलोसिस Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
काठमाडौं : नेपालमा सुँगुर, बङ्गुर तथा बँदेलको मासु उसिनेर, साँधेर खाने चलन छ। तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, यस्ता जनावरको मासु खाँदा ट्राइकोनेलोसिस नामको रोग लाग्न सक्छ।
ट्राइकोनेलोसिस रोग पशुपक्षीबाट मानिसमा सर्छ। यदि सुँगुर, बङ्गुर तथा बँदेल यस परजीवीबाट प्रभावित रहेछन् भने यो रोग मानिसमा सर्न सक्छ।
नेपालको परिवेशमा हेर्दा होटेल,रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसको रछ्यान नै सहरी बङ्गुरको मुख्य आहार भएकोले उपभोक्ता कति जोखिममा होलान्। अझ वधशाला अनुगमन अनि मासु जाँच त दसैँमा एक पटक मात्र गरिने त हो। त्यसैले बङ्गुर पालनको प्राज्ञिक व्यवस्थापन अनि वधशालाको प्राविधिक सुपरिवेक्षण गर्ने हो भने उपभोक्तामा सुँगुर, बङ्गुर तथा बँदेलजन्य मासुका परिकारप्रति आत्मविश्वास बढ्ने थियो।
यहाँ चर्चा गरिएको रोगको प्राज्ञिक शब्द ट्राइकोनेलोसिस भए पनि यसलाई बोलीचालीको भाषामा ट्राइकोनोसिस भनिन्छ। पशुपक्षीबाट मानिसमा सर्ने यो रोग अधकल्चो मासु खाएमा लाग्छ।
यो रोग फुच्चे गोल जुका ट्राइकेनेला एस्पाइरालिसका कारण हुन्छ। यस प्रजातिको परजीवीलाई एक्लै सम्बोधन गर्दा ट्राइचिना भनिन्छ। जुन ग्रिक शब्दावलीमा रौँ जस्तै भनिन्छ। यो रोगको व्याधिबाट मासु हाम्रो मौलिक परिकार जस्तो: सुँगुर, बङ्गुर तथा बँदेलको मासु राम्रोसँग पकाएर सेवन गर्ने हो भने सजिलै बच्न सकिन्छ।
यो रोग हुनसक्ने घटना, दुर्घटना, परिघटना
इ.सं.१९६५ मा यस परजीवीले मानव स्वास्थ्यका लागि गम्भीर चुनौती दिएको अनुमान गरिएको छ। विगतका दशकमा अमेरिकामा गरिएको सर्वेक्षण अनुसन्धान अनुसार वर्षेनी १०० देखि १५० मानिसको यस रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको अभिलेख पाइन्छ।
एक अध्ययन अनुसार करिब ७३ प्रतिशत सुँगुर, बङ्गुर तथा बँदेलजन्य अधकल्चो मासु सेवन गर्ने मानिसमा यो रोग पाइएको अभिलेख छ।
इ.सं. १९५० मा होटेल,रेस्टुरेन्टका रछ्यान अनि सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका फोहोरमैला बटुली पालिएका बङ्गुर खाएर यसको सङ्क्रमण भएको पाइएको छ। यस कारण कतिपय पश्चिमी विकसित मुलुकहरूमा यसरी बङ्गुर पाल्न कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको छ।
हाम्रो परिवेशमा भने बङ्गुर पालनको प्रमुख आधार नै यही रहेको अवस्थामा हाम्रा जनसमुदायमा त्यसको जोखिम उच्च छ। तर व्यवस्थित प्राज्ञिक अध्ययन, अनुसन्धान गरिएको छैन भन्दा हुन्छ। कतिपय मुलुकमा यसको प्रकोप तथा यसबाट बच्न उपभोक्ता सचेतना शिक्षा सञ्चालन हुने गरेका छन्।
व्यवस्थित वधशाला, वधस्थल तथा मासु जाँचसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागू नभएको अवस्थामा वैध,अवैध रूपमा पशुपक्षी वध गरिने चलनका कारण हाम्रा कति जनसमुदाय जोखिममा छन् भन्न सकिँदैन। अझै हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रमा त सुँगुर, बङ्गुर गाउँघर, सहर तथा नगरपालिकामा यी प्राणीले डुलेरै आफ्नो आहारा जोहो गर्छन्।
हाम्रा १५/२० प्रतिशत जनसमुदाय त यसै प्राणीबाट प्राप्त हुने मासुमा आधारित छन्। त्यसबाहेक पनि हाम्रो परिवेशमा केही जाति, जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय तथा विगतका द्वन्द्व प्रभावका कारण सहरी क्षेत्रमा बसाइसराइ गरी आएका समुदायको आयआर्जनको प्रमुख स्रोत नै बङ्गुर पालन भएको छ, त्यो पनि सहर-बजारमा सञ्चालित होटेल, रेस्टुरेन्टबाट रछ्यान नै आहाराको मुख्य स्रोत मानेर।
रोगका लक्षण बङ्गुर अनि मानिसमा
प्राकृतिक रूपमा ट्राइकिनोसिसबाट सङ्क्रमित बङ्गुर प्रजातिमा यसको प्रत्यक्ष लक्षण देखिँदैन। तर अत्यधिक मात्रामा यो परजीवी प्रयोग गराइ गरेको अध्ययनमा भने पक्षघात हुनुका साथै मुर्छा पर्ने गरेको पाइन्छ। तर मानिसमा यो परजीवीले आन्द्रा छेड्न पुग्यो भने झाडापखाला लाग्नुको साथै पेट दुख्ने हुनसक्छ।
यदि यो परजीवी प्रदूषित बङ्गुर प्रजातिको अधकल्चो मासु सेवन गर्ने गरेको भए यी परजीवी मानिसको रक्तसञ्चार प्रणालीमा प्रवाहित हुन पुगे भने मानिसमा ज्वरो आउने, अनुहार सुन्निने, आँखा वरिपरि सुन्निने, छालामा दरफर्‍याए जस्तो हुने, नङको जरामा रक्तस्राव हुने, आँखाको सेतो भागमा पनि रक्तस्राव देखिन सक्छ।
यस रोगको तीक्ष्ण अवस्थामा भने मुटुको मांसपेशीमा हुने विकृति, मायोर्काडाइटिस, निमोनिया तथा मस्तिष्कमा इन्सेफलाइटिस हुनसक्छ। सबै यी लक्षण बिरामीमा एकै पटक देखिन पुगे बिरामीले मृत्युवरण गर्न सक्छ।
रोग निदान गर्ने कसरी?
यो रोग निदान गर्न निकै गाह्रो छ। सामान्यतः पशुपक्षी काटमार गरी मासु तयार पार्दा खसी, बोका तथा राँगा अनि बङ्गुरका पेट, आन्द्राको बोसोमा स-साना पानीका थैला भेटिनु सामान्य मानिन्छ। त्यो मानवीय प्रयोग वर्जित परापूर्व कालदेखि नै हो। त्यसकै भरमा यसको प्रकोप यकिन गर्न सकिँदैन।
बङ्गुर प्रजातिमा यसको भरपर्दो निदानको प्रस्थान विन्दु त व्यवस्थित वधस्थल, वधशाला तथा मासु जाँचको सुनिश्चितता नै हो। जुन हाम्रो जस्तो अव्यवस्थित मासु उद्योग अनि उपभोग शृङ्खलामा यो स्तम्भकार असम्भव देख्छ, आजको स्थितिमा।
मानिसमा भने माथि उल्लेख गरिएका लक्षण ठ्याक्कै मिले, आँखा वरिपरि नपत्याउने गरी सुन्निएको पाइए, नपत्याउने गरी शरीरका मांसपेशी सुन्निए, बेला कुबेला ज्वरो आउने अनि पिनासको लक्षण देखिए तथा बिरामीले अधकल्चो बङ्गुर प्रजातिको मासु खाने बानी भएको पाइएमा यसको शङ्का गर्न सकिन्छ।
बङ्गुर प्रजातिको अधकल्चो मासु सेवन गरेको ३/४ हप्तापछि मांसपेशीको नमुना जाँच गरिने हो भने यो रोग भए/नभएको सङ्केत पाउन सकिन्छ। अझ जनसमुदायको रगत वेन्टोनाइट फलोकुलाटेसन जाँच जुन यो रोगको उत्तम जाँच प्रयोगशाला विधि मानिन्छ, जसले रोग बेलैमा थाहा पाइन्छ।
यस बाहेक इलैजा प्रविधिबाट छिटो तथा भरपर्दो निदान गर्न सकिन्छ। अझ वधस्थल, वधशाला अनि मासु जाँच गर्दा बङ्गुर प्रजातिको मासुको छड्के जाँच गरेर पनि निदान गर्न सकिन्छ।
अब रोकथामको कुरा गरौँ
१. बङ्गुर, बँदेलको मासु १६० डिग्री फरेनहाइटमा पकाएर खानुपर्छ।
२. अव्यवस्थित पशुपक्षीको वध व्यवस्थित गर्नुपर्छ। उपभोक्तासम्म पुग्ने सबै पशुपक्षीको मासु, पशुपक्षीको किसिम अनुसार दक्ष मासु विज्ञानमा विज्ञता प्राप्त पशु चिकित्सकबाट प्रमाणित हुनुपर्छ।
४. होटेल, रेस्टुरेन्ट अनि महानगर पालिकाको फोहोरको डङ्गुरबाट बटुलेको रछ्यान प्रशोधन वा निषेध गरी व्यवस्थित बङ्गुर पालन गर्ने व्यवस्था गर्नपर्छ।
५. सहरी क्षेत्रमा मात्र हैन ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवस्थित शौचालय सञ्चालन ।
नियन्त्रण र रोकथाम
यो रोगको उपचार त अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन तर नियन्त्रण तथा रोकथाम भने गर्न सकिन्छ।
बङ्गुर पालनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, वधस्थल अनुगमन अनि मासु जाँच तथा प्रमाणीकरण साथै जनसमुदायमा यस रोगबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । खोप तयार गर्ने कोसिसमा विश्व पशु चिकित्सक समुदाय प्रयत्नशील छ ।
'शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजीको समय सकियो, विमलेन्द्र र शेखरमा सम्भावना देख्छु'
२०७८ भदौ २४ गते १६:५५ मा प्रकाशित
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सुरु भएको छ। नेताहरुले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। तपाईंलाई कसैले सम्झिएका छन्? अहिले त छैन! गत वर्ष रामचन्द्र....
'राष्ट्रिय पुस्तकालय प्राधिकरण एक्लैले रोकेको हो र, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर रोकिएको हो नि !'
२०७८ भदौ २३ गते १९:५५ मा प्रकाशित
रानीपोखरी पुनर्निर्माणदेखि समयमै भूकम्प पीडितले राहत तथा आवास पाउन नसकेको भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको छ। ज्ञवालीले पुरातात्त्विक महत्त्वको काष्ठमाण्डप गत वैशाख १२ मै पुनर्निर्माण....
अनि हजुरबा फेरि एक्ला भए
२०७८ भदौ २२ गते १९:०७ मा प्रकाशित
परिवारका चारभाइ छोरामध्ये मेरा हजुरबा जेठा। दाजुभाइ छुट्टिने कुरा चल्यो। प्रत्येक भाइको भागमा आयो, माना बिउ लाग्ने जमिन। हजुरबा थिए, शुद्ध किसान। उनी हलो बनाउँथे,....
बच्चाले बिगारेको मोबाइल, मोबाइलले बिगारेका बच्चा
२०७८ भदौ २० गते ७:०० मा प्रकाशित
समय–समयमा आउने प्राकृतिक विपत्ति, रोग, महामारीले मानव जीवनलाई अस्तव्यस्त पार्ने गरेको छ। यतिखेर कोभिडको महामारीले मानिसलाई निकै सताइरहेको छ। कोरोना महामारीले मानिसको बानी–व्यवहारमा धेरै परिवर्तन....
अहिले राजनीतिक अस्थिरताको उधुम मच्चिएको छ : महन्थ ठाकुर
२०७८ भदौ १७ गते १९:११ मा प्रकाशित
बुधबार अबेर साँझ उनले उत्साहित मुद्रामा उकेराकर्मी अनिलकुमार कर्णसँग कुराकानी गरे। मानक मैथिली भाषामा कुराकानी आरम्भ गरेका ठाकुर स्वभावविपरीत धेरै पटक हाँसे। हाँसेरै उनले केही....